I-Huawei Mate X izokwaziswa ngokusesikweni ngoJuni | I-Androidsis
U-Huawei ngempazamo utyhila ukumiliselwa kwe-Mate X
IHuawei Mate X, thaca kwi-MWC 2019 yokugqibelaNgenye yeefowuni ekulindeleke kakhulu kwezi nyanga. Kuba ikufuphi nembangi yakhe Galaxy Fold, Ukuphela kwefowuni esongwayo kwintengiso namhlanje. Nangona kungekho fowuni ifikileyo ezivenkileni. Into ekufuneka itshintshe kule ntwasahlobo.
Kwimeko ye-smartphone yohlobo lwesiTshayina, kwakungekho datha ngomhla wokumiliselwa. Le Huawei Mate X yaziwa kuphela ukuba iyaphathwagaría ngexabiso lama-2.299 euros ezivenkileni. Kodwa, impazamo ngophawu lwesiTshayina ngesele lusinike umkhondo malunga nomhla wokumiliselwa.
Kuba inokubonwa okwethutyana kwiwebhusayithi yayo, nangona sele icinyiwe, ukuba le Huawei Mate X izokwaziswa ngokusesikweni ngoJuni. Into esingayaziyo kukuba uJuni ngumhla wokumiliselwa komhlaba, okanye ukuba ibiyintengiso ethile. Kodwa kubonakala ngathi le iya kuba yinyanga apho silindele ukuba esi siphelo sophawu lwesiTshayina sifike.
Ke entwasahlobo okanye ekuqaleni kwehlobo kuyenzeka ukuba uthenge le brand brand. Ukwazisa oko iya kuba yinto kamva kuneGold Fold. Isiphelo esiphakamileyo seSamsung kulindeleke ukuba senze ukungena eYurophu ekuqaleni kukaMeyi. Ke kuya kubakho umohluko wenyanga enye ngaloo ndlela.
Ke siyakubona ezi fowuni zimbini zikhuphisana ukulawula icandelo lokusonga le-smartphone. Nangona kule meko iHuawei Mate X ibiza kakhulu kwezi zimbini. Kuba i-Samsung iya kuba nexabiso eliphantsi, eya kwahluka ngokuxhomekeka kwilizwe lokumiliselwa. Iya kuba yinto enomdla ukubona ukuba yeyiphi eyona nto bayithandayo abathengi.
Nangona sinezinyanga ezimbalwa ukuya jonga ukuba yeyiphi kwezi fowuni zimbini eziza kuba zithandwa kakhulu kwintengiso. Ucinga ntoni ngale Huawei Mate X? Siyathemba ukuba umhla wokukhutshwa kwayo uza kuqinisekiswa kungekudala. Ukufumanisa ukuba kuya kufika nini kwimarike yaseSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » U-Huawei ngempazamo utyhila ukumiliselwa kwe-Mate X
I-Galaxy J8 iqala ukufumana i-Android Pie
IHuawei inolindelo oluphezulu kuthotho lwe-P30: ukulungiselela iiyunithi ezizizigidi ezi-6 kwintengiso yehlabathi